SAS 2022 Oppositions Agenda - ita kuti ivandudzwe HERE! | Kuumbwa uye kudzidza
El Andalusian Hutano Service (SAS) yakadaidza huwandu hwenzvimbo mazana mana nemazana mana nemakumi mashanu ezviuru zvezvinzvimbo mukati mekuchinja kwemahara Asi ivo havakanganwe kukwidziridzwa kwemukati, iine dzimwe nzvimbo mazana matatu nenomwe. Dzese dzichagovewa pakati peanopfuura makumi matatu nematatu hunyanzvi, pakati pawo Ophthalmology, Oncology, Pediatrics kana Plastic Surgery, pakati pevamwe. Zvakare nezvevashandi vehutungamiriri, vanozove nemabasa anodarika mazana maviri, vabiki vane 4.425 nevashandi vezvemagariro vane huwandu hwe337.
SAS kupesana ajenda
Pazasi iwe unowana ese akagadziridzwa ajenda kuti uzviratidze iwe kune ese zvinzvimbo zveAndalusian Health Service uye vanopokana neSAS:
Nyanzvi Nyanzvi muRadiodiagnosis
Maitiro ekunyoresa kumakwikwi eSAS
Izvo zvikumbiro zvekukwanisa kunyoresa zveSAS zvinopesana, pamwe nekubhadharwa zvakafanana, zvinogona kuitwa kuburikidza ne telematics. Iyo ndeimwe yenzira dzinokurumidza, asi iwe zvakare une yakadhindwa sarudzo.
Kana iwe ukasarudza yekutanga sarudzo, saka unofanirwa kuita chikumbiro chako chekutora chikamu kuburikidza newebsite ye Andalusian Board uye mune inotevera email kero, yakazadzwa nefomu yemagetsi inoenderana.
Kunyangwe iwe uchifanira kuziva kuti kuti uite chikumbiro nenzira iyi, isu tichada siginicha yedhijitari.
Kana chikumbiro chaitwa, iro peji rinotitungamira kune iyo 'yekubhadhara chikuva'. Vese vanhu vane dhigirii rehurema rakaenzana kana kupfuura 33% vakasunungurwa pamubhadharo iwoyo.
Kana iwe uchida kusarudza iyo yakadhindwa kunyorera, hazvizove zvakanyanya kuomarara futi. Kana isu tisina siginicha yedhijitari, ndiyo sarudzo yatakasiya.
Zvekare isu tichafanirwa kuenda kune iro peji reiyo Andalusian hutano sevhisi. Kamwe ipapo, isu tichafanirwa kunyoresa.
Ipapo, isu tichafanirwa kufukidza zvese zvemunhu data izvo zvinokumbirwa.
Kana tangovharwa, tinotumirwa email ine kusimbiswa.
Kubva ipapo isu tinoteedzera chikumbiro chedu, kuratidza iko kutendeuka kwatinotaridzika, dunhu, nezvimwe.
Kana zvese zvinhu zvangovharwa, gwaro rinogadzirwa. Nekudaro, isu tinofanirwa kugara tichichengeta shanduko dzese dzatakaita uye pakupedzisira, todhinda. Mariri tichaonawo mwero unoenderana ne42,67 euros.
Rangarira kuti iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti rese data neminda zvakafukidzwa, kudzivirira zvikanganiso.
Rimwechete akadhinda gwaro, unofanirwa kusaina makopi ese.
Nemafomu ekubhadhara, tichaenda kusangano kunoisa mari. Zvimwe zvezvinhu kwaungaite Ita muripo Ivo ndeaya: La Caixa, BBVA, Banco Santander, Unicaja, Cajasol, Bankia, nezvimwe.
Pakupedzisira, tinoisa zvinyorwa zvese muhamvuropu, senge kopi yemubhadharo wemari, kunyorera uye zvimwe zvinyorwa kana zvichidikanwa. Tichaenda nehamvuropu iyi kuCentral Services yeAndalusian Health Service, pamwe nezvipatara zveAndalusian Health Service kana muPost Office.
Nzvimbo dzinosarudzwa mumakwikwi eSAS
Administrative Mubatsiri: Iwo manejimendi manejimendi anoshanda munzvimbo yeAndalusian Health Service ndivo vari pamusoro pekugadzwa pamwe nekubvunzana, pamwe nekugadzirira kwemamwe mareport. Pasi pevabatsiri zvichave zvakapoterera 1300 euros. Kunyangwe isiri iyo yakatarwa huwandu, nekuda kwekuwedzera mari uye zvimwe zvinowedzerwa.
Mukoti mubatsiri: Iyi chinzvimbo zvakare ine muhoro uyo unenge wakakomberedza 1320 euros. Semutemo wakajairwa, vabatsiri ndivo vanoona nezvekuchenesa pamwe nekuchengetedza nzvimbo yebasa, kuchengeta varwere, kugadzira mibhedha kana kuperekedza vanorwara, pamwe nekugovera chikafu, pakati pevamwe vazhinji.
Mapindu: Mabasa anoitwa neakarongeka zvakare akawanda. Pakati pavo pane zvinhu zviviri nevarwere. Ivo vanozobatsira vanamukoti, kuisa uye kubvisa wedges, uye zvakare kubatsira nemamwe mabasa ekuchenesa, kana zvichidikanwa. Mubhadharo wake wakakomberedza mazana gumi nemaviri euros.
Nursing: Kuchengeta nderimwe remabasa ekutanga evashandi vese vanamukoti. Ivo kuraira uye kuongorora varwere, uku vachiita sarudzo pamusoro pavo. Zvinogona kutaurwa kuti irudzi rwemubatsiri kuna chiremba, uyo anotumira mabasa mazhinji kuvashandi vevanamukoti. Kudzidzira kurapa uye kubatsira vanorwara ndiwo mamwe mabasa akakosha. Mubairo wake unodarika 2000 euros.
Physiotherapist: Ivo vari pamusoro pekuita ekugadzirisa marapirwo uye vanopa asiri-pharmacological ekurapa dzimwe nzira dzekudzivirira akawanda maronda. Mubairo weve physiotherapists wakakomberedza 1900 euros.
Laundry nekuayina: Mubhadharo wevashandi vekuwachira uye wekusungisa ndewemazana euros. Sezvatakambotaura kare, zvinogona kusiyana zvichienderana nemari yekuwedzera uye zvimwe zvinokurudzira. Seizvo zita ravo rinoratidza, ivo vari mukutarisira kwekuchenesa mibhedha nekuiisa muhurongwa.
Matron: Nyamukuta kana nyamukuta ndivo vanoona nezvekuyambira pazvinhu zvakasiyana zvehupenyu. Zvese mune zvebonde zvakawandisa uye panguva yepamuviri, kusununguka kana kuyamwisa. Kana iri yemubhadharo, inosvika kudarika zviuru zviviri zveeuro.
Scullion: Mubhadharo wevabatsiri ndeye 1200 euros. Achave mubatsiri wemubiki mukuru uye achange ari panguva dzose achiziva akasiyana mabasa ekicheni. Iye acharonga iyo pantry, chengetedza zvese kurongeka, uye nekuchenesa.
Radiodiagnosis nyanzvi yehunyanzvi: Ivo vane basa rekutora mifananidzo yemuviri kudzivirira zvimwe zvirwere. Kuti vaite izvi, vanoshandisa matekinoroji akaomarara senge Ultrasound kana magnetic radiation uye maX-ray.Mihoro yavo inodarika ma1500 XNUMX euros.
Pharmacy Nyanzvi: Mubhadharo wepasi wehunyanzvi hwemishonga ndeye 1329 euros. Iyo yakatsaurirwa kugadzirira, pamwe nekuchengetedza kana kupa mishonga. Iwe unogona zvakare kuzvigovera muzvipatara uye kugadzirira zvigadzirwa asi nguva dzose pasi peziso rakatarisa remufemesi.
Sezvo iwe uchinyatso kuziva, yega yega hunyanzvi hune chakanangana nehurongwa uye ese anowirirana mune imwe ichave yakajairika uye iri inotevera:
Nhaurwa 1. Bumbiro reSpain ra1978: Hunhu hwakakwirira nemitemo inosimudzira Kodzero dzakakosha nemabasa; Kodzero yekuchengetedzwa kwehutano.
Nhaurwa 2. Iyo Statute yekuzvimiririra yeAndalusia: Yakakwirira tsika uye zvakakosha zvibodzwa Kodzero dzevanhu, mabasa uye zvirongwa zveveruzhinji; Unyanzvi hwehutano; Institutional musangano weAtonomous Community; Kugadziriswa kwemitemo.
Nhaurwa 3. Sangano rehutano (I). Mutemo 14/1986, waApril 25, General Hutano: General Misimboti; Unyanzvi hwePublic Administrations; General Sangano reRuzhinji Hutano Sisitimu. Hutano Mutemo 2/1998, yaJune 15, Andalusia: Chinhu, misimboti uye chiyero; Kodzero nemabasa evagari maererano nehutano mabasa muAndalusia; Kubudirira kwekodzero nemabasa. Andalusian Hutano Hutano: kuzvipira.
Nhaurwa 4. Sangano rehutano (II). Maumbirwo, kurongeka uye masimba eiyo Ministry of Health uye iyo Andalusian Health Service. Utano muAndalusia: Maumbirwo, kurongeka uye mashandiro emabasa ekutanga ekuchengetedza muAndalusia Sangano reRinosarudzika Rubatsiro muAndalusia. Sangano rekutanga Kuchengeta. Chipatara Sangano. Health Management Nzvimbo. Kuenderera mberi kwekutarisira pakati pematanho ekuchengetedza.
Nhaurwa 5. Dziviriro yeData. Organic Mutemo 15/1999, waDecember 13, pamusoro peDziviriro yeDunhu Dhata: Chinangwa, chiyero chekushandisa nemisimboti; Kodzero dzevanhu. Sangano reSpain reDziviriro yeData.
Nhaurwa 6. Kudzivirira njodzi dzebasa. Mutemo 31/1995, waNovember 8, paKudzivirira Njodzi dzeKubasa: Kodzero uye zvisungo; Kubvunza uye kutora chikamu kwevashandi. Sangano rekudzivirira njodzi pabasa muAndalusian Health Service: maYuniti Ekudzivirira munzvimbo dzeRubatsiro dzeAndalusian Health Service. Management yezvinhu zvipenyu. Ruoko rwehutsanana. Chimiro. Iyo data inoratidza skrini. Iyo netsaona kubaya. Kurwiswa kune nyanzvi. Kudzora kwemamiriro ezvinhu anopesana.
Nhaurwa 7. Mutemo 12/2007, waNovember 26, paKusimudzira kweGender Equality muAndalusia: Chinangwa; Nzvimbo yekushandisa; Mazano akazara; Mitemo yeruzhinji yekusimudzira kuenzana kwevakadzi. Mutemo 13/2007, waNovember 26, pamusoro peKudzivirira uye Kwakakwana Kudzivirirwa paGender Violence: Chinangwa; Nzvimbo yekushandisa; Mazano anotungamira; Kudzidziswa kwevashandi vehutano.
Nhaurwa 8. Mutemo wepamutemo weVashandi. Nguva yekutadza kweVashandi pabasa rePublic Administrations. Mutemo 55/2003, waZvita 16, Sisitimu Statute yeVamiriri veMutemo veVashandi Vehutano: Kurongwa kwevashandi vepamutemo; Kodzero nemabasa; Kuwana uye kurasikirwa kwechimiro chevashandi vepamutemo vechigarire; Kupa kwenzvimbo, kusarudzwa uye kusimudzira kwemukati; Kufamba kwevashandi; Basa; Mubhadharo; Mazuva ekushanda, mvumo uye marezinesi; Mamiriro Evashandi Vemutemo. Hurumende yekuranga; Kodzero dzekumiririra, kutora chikamu pamwe nekubatana pamwe chete.
Nhaurwa 9. Kuzvimiririra kwemurwere uye kodzero uye zvisungo zvine chekuita neruzivo uye zvinyorwa zvemakiriniki. Mutemo 41/2002, waNovember 14, wakakosha kudzora Kuzvimiririra kweMurwere uye Kodzero uye Zvinotarisirwa muNyaya yeRuzivo neKiriniki Zvinyorwa: Kodzero yeruzivo rwehutano; Kodzero yekuvanzika; Kuremekedza kuzvimirira kwemurwere; Nhoroondo yezvokurapa. Mvumo yekuziva. Kadhi rehutano.
Kuti ukwanise kusarudza dzakananga, tinokusiya uine iyi link, kwaunowana ajenda dzese izvo zvaunoda nenzira inokurumidza uye yakapusa nzira.
makore ari pasi pegumi nematanhatu.
Vanobata nyika yeSpain uye nyika dzenhengo dzeNhengo dzeEuropean Union.
Iva muridzi weiyo zita rinodiwa mune chaiwo mabheseni efoni imwe neimwe, zvinoenderana nechinzvimbo chatiri kuzosvika.
Kusina chero rudzi rwemafaira ekuranga mukati mebasa reiyo chero Hutano Service kana yePublic Administration.
Usave nekutongwa nemutongo wekupedzisira pamhosva ipi neipi inopokana nerusununguko kana iyo inosanganisira kurohwa, pamwe nekushungurudzwa pabonde.
Kana tichitaura nezvenzvimbo dzekuchengetera vanhu vakaremara, vanyoreri chete vane hurema hwehurema hwakaenzana kana kupfuura 33% ndivo vanogona kutora chikamu.
Pamusoro peizvi zvimiro zvinodiwa, hunhu hunodiwa pahunhu hwese hunofanirwa kutariswa.
Musoro weSuperior Technician (Nyanzvi Yekudzidzisa yeDhivha yepamusoro yebazi ripi neripi). Yakakwirira Bachelor kana BUP.
Yunivhesiti yekupinda bvunzo yevanhu vanopfuura makore makumi maviri nemashanu ekuberekwa.
Technical Title (Pakati Pakati Giredhi Kudzidziswa).
Chekutanga Degree Ruzivo rwekudzidzisa.
Clinical Mubatsiri Technician Musoro (Chekutanga Degree Ruzivo rwekudzidzisa, bazi rezvehutano)
Nursing Assistant Technician (Professional Module Chikamu 2).
Pakati-giredhi rekudzidzira basa.
Kirasi B rezinesi rekutyaira nemvumo yekutakura chikoro, yeruzhinji yekutakura vanhu.
Musoro weSuperior Technician (Nyanzvi Yekudzidzisa yeDhivha yepamusoro yebazi ripi neripi).
Chechipiri Degree Professional Training kana zvakaenzana.
Dhigirii Degree mu Nursing.
YeFarmacist Yekutanga Kuchengeta:
Bachelor's Degree muFarmacy kana Bachelor's Degree muFarmacy.
Zvekusarudzika Nzvimbo Nyanzvi:
Musoro wehunyanzvi mune hunyanzvi hwainotarisirwa kuwana.
Kupikiswa kune iyo SAS yePhysiotherapy:
Diploma muPhysiotherapy kana Degree muPhysiotherapy.
ATS / Yakakodzera nyanzvi muPhysiotherapy.
Industrial technical Injiniya Degree kana Degree muinjiniya.
Musoro wehunyanzvi mune Obstetric-Gynecological Nursing (Nyamukuta).
Zvekutanga Kuchengeta Chiremba Mhuri:
Musoro weArapi Nyanzvi muMhuri uye Nharaunda Mushonga.
YeVashandi veLaundry neI Ironing, mubatsiri wekicheni:
Musoro weFarmacy Technologist (Nyanzvi Yekudzidzisa yeMedhi Degree, bazi rehutano).
Kupikiswa kune iyo SAS yehunyanzvi Nyanzvi muRadiodiagnosis:
Musoro wehunyanzvi Nyanzvi muRadiodiagnosis (Yechipiri Degree Professional Kudzidziswa, Hutano bazi).
Musoro weSuperior Technologist muMufananidzo weKuziva (Dhigirii Dzepamusoro Kudzidzisa, Nyanzvi yemhuri Hutano).
Diploma yeYunivhesiti muNursing.
Nyanzvi degree muRadiology uye Electroradiology.
Kubvumidzwa kushandisa X-ray michina yezvinangwa zvekuongorora zvakapihwa neNuclear Safety Council
Kune Nyanzvi Nyanzvi muRadiotherapy:
Musoro wehunyanzvi Nyanzvi muRadiotherapy (Chechipiri Degree Professional Training, Hutano bazi).
Musoro weSuperior Technologist muRadiotherapy (Kudzidzisa Kuruu reSuperior Degree, nyanzvi yemhuri Hutano).
Radioactive chiteshi chinoshanda chezinesi chakapihwa neNuclear Safety Council mumunda we radiotherapy application.
Yehunyanzvi Hofisi Yekuita Basa:
Kune Nyanzvi Yefoni:
Diploma muSocial Work.
Degree muSocial Work.
Bvunzo kana sarudzo sisitimu
Sezvazvinowanzoitika mune izvi zviitiko, bvunzo ine zvikamu zviviri zvakajairika. Imwe yadzo chikamu chinonzi chekupikisa uye chechipiri, icho chemakwikwi emhando yepamusoro.
Iwo akanyanya mamakisi echikamu chino anova zana mapoinzi. Ichave ichibvisa uye ichave iine anotevera bvunzo:
Kuita bhuku remibvunzo. Pachave paine yakazara 103 mibvunzo uye yese yacho yakawanda sarudzo. Rangarira kuti matatu acho achachengetwa. Iwo akanyanya kukwana mamaki achave makumi mashanu poindi.
Chikamu chechipiri ibvunzo rinoshanda rine mibvunzo makumi mashanu, zvakare sarudzo dzakawanda. Pano dingindira chairo rechikamu chatiri kupikisa chinopinda. Ivo anowanzo kuve akagadzirwa chaiwo-ehupenyu makiriniki kesi. Iwo akanyanya mamakisi muchikamu chino anove makumi mashanu poindi.
Kune vanhu vanosarudza nzvimbo dzekuwana dzakachengeterwa vanhu vane hurema hwepfungwa, vane bvunzo yekubvisa. Ichasanganisira kuitisa bvunzo ine 50 mibvunzo yakawanda yesarudzo.
Iwe unofanirwa kuziva kuti yega mhinduro chaiyo inozokosheswa nemapoinzi maviri, hapana mapoinzi anozobviswa pamhinduro dzisina kururama. Kupasa chikamu chevanopikisa, zvibodzwa zvakawanikwa (huwandu hwezvikamu zvakawanikwa mubvunzo remibvunzo uye mune rinoshanda remibvunzo) rinofanira kusvika, kanokwana, 2% yezvibodzwa.
Kana iwe wapasa chikamu chevanopikisa, ipapo iwe unosvika kune inonzi inonzi chikamu chemakwikwi. Pano pazere mamakisi atinogona kuwana anozoita zana mapoinzi. Izvo zvakawanikwa muchikamu chekutanga zvichawedzerwawo.
Zvino zvatava kuziva mapoinzi akakosha ekukugona kukupa iwe Kumakwikwi eAndalusian Health Service (SAS), inguva yako, nekuti nzvimbo dzinoramba dzichiwedzera gore rega rega.